Mogadishu Journal » Maxaad kala socotaa Qilaaf cusub ee soo kala dhex galay Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra’isul wasaare Saacid…?
Waxaa jira shaki baahsan oo u dhexeeya Madaxda sare ee dalka, gaar ahaan Madaxweynaha iyo Ra’isul wasaaraha, waxaana inta badan shakigaasi dhaliyay bixidda badan ee madaxweyne Xasan Sheekh uu mar waliba u baxo dalalka dibadda.
Sidoo kale shaki ku wajahan qorshaha cusub ee lagu doonayo in la isku shaandheeyo xukuumadda ayaa jira kadib markii qorshahaasi uu faraha la soo galay madaxweynaha.
Waxa kale oo jira guux hoose oo sheegaya in labada nin ay isku hayaan u kala hiilinta qabiilada ay ka kala dhasheen, gaar ahaan Ra’isul wasaaraha ayaa isaga la saftay ganacsato ka soo jeeda beesha xaaskiisa ay ka dhalatay kuwaasoo doonaya in wixii ku saabsan ganacsi ama maalgashi ee ganacsatada dan ugu jira iyaga loo gacan geliyo halka madaxweynuhuna uu taas bedelkeeda la doonayo ganacsatada beeshiisa oo arrintaas ula soo hoos gashay.
Waxaa kale oo la isku heystaa lacagaha dibadaha laga soo qaado ee intooda badan madaxweynaha uu soo qaado, wuxuuna Ra’isul wasaaruhu bilaabay la xisaabtan madaxweyne gaar ahaan danaha dhaqaalaha, waxaana madaxweynaha lagu eedeynayaa inuu qabto howsha xukuumadda gaar ahaan howlihii wasaraadaha Maaliyadda, Arrimaha Gudaha iyo Arrimaha Dibadda.
Sidoo kale waxaa madaxweynaha lagu dhaliilsan yahay isaga iyo Ra’isul wasaarahana sii kala fogeeyay isagoo howshii Ra’isul wasaaraha u gacan geliyay Faarax C/qaadir oo noqday La-taliyaha, gacan-yaraha iyo boorsada madaxweyne Xasan Sheekh, kaasoo loo diro howshii uu lahaa Ra’isul wasaaraha, isagoo aan sidoo kale marna ka harin safarada uu madaxweynaha sida joogtada ah ugu ambabaxo dalalka dibadda.
Ra’iisal Wasaare Saacid oo haatan hurdada ka kacay waxa uu bilaabay inuu boorka iska jafo, wuxuuna kulamo siyaasadaysan la qaataa waxgaradka reer Muqdisho haba ugu badnaadeen kuwa reerka xaaskiisa ay ka soo jeedo oo madaxweynahana aan la tusi karin, sidoo kale wuxuu Saacid la xirtay oo u heelan xubno ka tirsan Baarlamaanka iyo wasiiro isaga ku fakar ah, wuxuuna haatan bilaabay inuu Baarlamaanka ammaano isagoo sheega in isaga iyo Baarlamaanka ay wadashaqeyni ka dhexeyso, taasoo muujinaysa in isaga iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka iska war hayaan iskuna xiran yihiin.
Kala shakiga iyo khilaafka madaxweynaha iyo Ra’isul wasaare Saacid ayaa waxa uu sidoo kale salka ku hayaa mashruuc dib loogu dhisayo Garoonka Diyaaradaha Muqdisho oo uu Ra’isul wasaaraha doonayo inuu gacanta u geliyo Ganacsato isaga ku xiran, halka madaxweynahana uu ganacsato isaga la saf ah uu la doonayo mashruucaas oo la aaminsan yahay inay ku baxayso lacag aad u fara badan, faa’iido badana laga helayo.
Sidoo kale waxaa jira in Ra’isul wasaare uu ka carooday safarkii madaxweyne Xasan Sheekh uu ku tagay Switzerland, Beljamka iyo London ee lacagaha Soomaaliya loogu yaboohayay in safarkaasi laga baajiyay wasiirka Maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Xasan Suleymaan, bedelkiisana la geliyay Faarax C/qaadir oo isaga inta badan buuxiya boosaska Wasiirada Maaliyadda iyo Arrimaha dibadda.
Shakiga ugu weyni waxa uu yimid kadib markii lacago dowladda Soomaaliya ay dibadaha ka soo heshay la siiyay ganacastadii maalgelisay ololihii Madaxweyne Xasan Sheekh markii u tartamayay Jagada Madaxweynaha, taasoo Ra’isul wasaare Saacid uu si weyn uga carooday.
Inta badan Ra’isul wasaare Saacid looma sheego safarada uu madaxweynaha dalalka dibadda ku tegayo, wuxuuse ka war helaa mar uu madaxweynuhu qabanqaabo safar ku jiro amaba uu ambabaxay, sidoo kalena safaaradaha dibadaha ayaan wax xiriir ah la lahayn Ra’isul wasaaraha, waxayna si toos ah ugu xiran yihiin oo ay la soo xiriiraan Agaasimaha Madaxtooyada oo lagu magacaabo Kamaal Daahir Guutaale oo u shaqeeya sidii wasiir arrimo dibadeed.
Agaasimaha madaxtooyadu waa nin dhalinyaro ah oo awood buuxda ku leh madaxtooyada, waana ninka kaliya ee gacanta ku haya sirta iyo jadwalka Madaxweynaha, waxaana la sheegaa in uu yahay ninka kaliya ee ka warqaba wafdiyada Caalamka ka socda ee booqanaya Xamar, taasoo Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha aan la war gelin waxbana aanu kala socon.
Haddaba shakigan cusub ee u dhexeeya Madaxweynaha iyo Ra’isul wasaaraha gaar ahaan shakigaasoo ku baahsan Ra’isul wasaare Saacid ayaa waxa la ogaan doonaa halka uu ku dambeyn doono, iyadoo midda ugu weyn ee haatan ka dhex taagan ay tahay isku shaandheynta Golaha wasiirada xukuumadda oo madaxweyne Xasan Sheekh uu doonayo in uu ku soo biiriyo xubno Damu-jadiid u badan, taasoo Ra’isul wasaare Saacidna uu ka boodsan yahay, balse waxaa la leeyahay waxaa xalinta arrintooda haatan ku guda jira Madaxweynaha dalka Jabuuti oo madaxweynaha Soomaaliya uu u gudbiyay khilaafka ka dhex oogan isaga iyo Ra’isul wasaarihiisa, lase arki doonee meesha arrini sal dhigato oo ay ku dambeyso.
2013/10/18 Abdirahman Dalmar <caaqildalmar@gmail.com>
Maxaad kala socotaa shakiga cusub ee soo kala dhex galay Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra’isul wasaare Saacid…?